Madaxweynaha dalka Eritrea oo markii labaad booqasho ku tagay dalka Itoobiya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaMadaxweynaha dalka Eritrea oo markii labaad booqasho ku tagay dalka Itoobiya
Hiiraan Xog, Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa garoonka caalamiga ah ee Bole kusoo dhoweeyay madaxweynaha dalka Eretrea Isaias Afwerki oo markii labaad booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Dalka Itoobiya.Booqashada madaxweynaha Eritrea, Asaias Afwerki uu ku joogo Itoobiya ayaa qaadan doonta laba maalmood sida uu sheegay agaasimaha xafiiska ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Itoobiya.
“Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa saakay garoonka caalamiga ah ee Bole ee magaalada Addis Ababa kusoo dhoweeyay madaxweynaha dalka Eritrea oo booqasho laba maalmood ah ku joogi doona dalka Itoobiya” ayuu yiri Fitsuma Arega, agaasimaha xafiiska Ra’iisul wasaare Abiy Axmed.
Fitsuma Arega ayaa intaas ku daray in xiriirka labada dal uu dhan walba ka sii xoogeystay madaxda labada dalna ay ka shaqeynayaan sii adkeynta xiriirka labada dal.
Wasiirka warfaafinta dowladda Eritrea Yemane Meskel ayaa dhankiisa sheegay in safarka madaxweynaha Eritrea uu hadafkiisu yahay in madaxda labada dal ka wada hadlaan horumarada laga sameeyay heshiiskii labada dal ay kala saxiixdeen bishii July ee sanadkan.
“Kadib casuumaad uu ka helay Ra’iisul wasaare Abiy Axmed, Madaxweyne Asaias Afwerki waxa uu booqasho aan rasmi aheyn oo laba cisho qaadan doonta ku gaaray dalka Itoobiya, madaxda labada dal ayaa ka wada hadli doona horumarada laga sameeyay hirgelinta heshiiskii July ay labada dowlad wada galeen” ayuu yiri Yemane Meskel, wasiirka warfaafinta dowladda Eritrea.
Asaias Afwerki iyo Abiy Axmed labaduba min laba jeer ayey booqdeen Itoobiya iyo Eritrea, tan iyo bishii July xiriirka labada dal waxa uu gaaray heer aad u sareeya waxa uuna saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan siyaasadda Geeska Afrika.